Kulan Baroor Diiq ah oo Loo Sameeyay Allaha u naxariistee Kadare iyo Xasan Kuuriya oo Nairobi Lagu Qabtay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kulan uu soo qaban qaabiyay ururka Suxufiinta qurba-joogta ee dalka Kenya (SEJASS)kaasi oo loogu baroor diiqayay loogu duceynayay allaha u naxariistee Dr Xuseen Sheekh Axmed Kadare iyo Xasan Ciise Cali Xasan Kuuriya ayaa maanta lagu qabtay xaafada islii ee magaalada Nairobi.
Kulankan baroor-diiqda iyo ducada isugu jiray ayaa waxaa ka soo qeyb galay suxufiyiin caan ah oo ay ka mid ahaayeen Yaasiin Ciise Wardheere,Shukri Maxamuud Afrax,Cali Muuse Cabdi,Faarax Lamaane iyo Liibaan Cabdi Warsame.
Wariyaasha ay ka midka yihiin Yaasiin Ciise Wardheere,Shukri Maxamuud Afrax iyo Cali Muuse Cabdi ayaa ka sheekeeyay taarkiihda iyo waxyaabihii ay ka yaqaaneen allaha u naxariiseee Dr Xuseen Sheekh Axmed Kadare iyo Xasan Ciise Cali Xasan Kuuriya oo horaantii bishan ku kala geeriyooday dalalka Soomaaliya iyo Hindiya.
Guddoomiyaha ururka wariyaasha qurba-joogta ee dalka Kenya Maxamed Cismaan Xuseen (New York) iyo wariyaashii kale ee goobta ka hadlay ayaa ka tacsiyeyay geeridda marxuumiinta,iyagoo alle uga baryay in uu qabriga u waasiciyo.
Faarax Lamaane oo kamid ahaa ehelada looga tacsiyeynayay geeridda allaha u naxariistee Xasan Ciise Cali Xasan Kuuriya ayaa u mahad celiyay ururka wariyaasha qurba-joogta ee dalka Kenya,isagoo alle uga baryay marxuumiinta in uu janadii fardowso ka waraabiyo.
Allaha u naxariiseee Dr Xuseen Sheekh Axmed Kadare iyo Xasan Ciise Cali Xasan Kuuriya oo horaantii bishan tii alle ugu kala geeriyooday dalalka Soomaaliya iyo Hindiya.
Taliyaha Hey’adda Nabad Sugida Iyo Mas’uuliyiin kale Oo U Daawasho Tagay Galabta Ciyaar Ka Dhacday Garoonka Banaadir